Australia oo dhaqaalo ugu deeqday abaaraha ka jira Somalia & Ethiopia - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Australia oo dhaqaalo ugu deeqday abaaraha ka jira Somalia & Ethiopia
Australia oo dhaqaalo ugu deeqday abaaraha ka jira Somalia & Ethiopia
Dowlada Australia ayaa balanqaad dhaqaalo u sameysay dowlada Soomaaliya iyo dowlada Ethiopia waxii ka dambeeyay markii abaaro daran ay ka dhaceen deegaano iyo gobolo ku yaala labada dale ee Ethiopia iyo Soomaaliya.
Dowlada Australia ayaa shaacisay in ku dhawaad 15 milyan oo doolar ugu deeqday labada dal, iyada oo kaga jawaabeyso qeylo dhaanta dhanka abaaraha ee maalmihii ugu dambeeyay ka jiray labada dal.
Shan milyan oo kamid ah dhaqaalahaasi ayaa si gaar ah waxaa loogu talo galay in wax looga qabto xaaladaha abaaraha ee ka jira gobolo ku yaala dalka Soomaaliya.
10 Milyan oo lacagtaasi kamid ahaa ayaa dowlada Australia waxay u qorsheysay in wax loga qabto abaaraha saameeyay kumanaanka ruux ee kusugan dalka Ethiopia, sida lagu sheegay warbixin dowlada kasoo baxday.
Maalgelinta dheeraadka ah ee la siinayo Ethiopia ayaa lagu bixin doonaa adeegyada cuntada, gargaarka, nafaqada, caafimaadka iyo wax ka qabashada nadaafadda.
Gobolo ku yaala deegaanada Somaliland iyo Puntland ayaa la sheegay iney ka jirto abaar daran oo saameysay dadka reer guuraaga ah.
Previous articleDHAGEYSO: Barnaamijka Waanada Dhaqtarka ee Idaacada Risaala 10-02-2016
Next articleWadaad Caan ah oo lagu gowracay Duleedka degmada Buulo-burde.
Imaaraadka oo jawaab aan la fileyn ka bixiyey dilka saynisyahankii Iran
Guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka dadaban oo soo saaray war
Shir looga hadlaayo Ammaanka oo Muqdisho ka furmay
Madaxweynaha Somaliland oo kulan la yeeshay Safiirka Czech Republic
Rooble oo ugu baaqay Madaxda Garsoorka in ay caddaalad falaan